၁၀။ အောင်မြင်သော Reboot သို့မဟုတ် Recovery အတွက်သိကောင်းစရာများ! - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
တစ်အောင်မြင်သော Reboot သို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက် 10 သိကောင်းစရာများ!
အောက်ဖော်ပြပါနေရာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရှင်းများသို့အဂတိလိုက်စားမှုမှပြန်လည်ထူထောင်ရန် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ပြန်လည်ထူထောင်ရန် (သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ပြန်လည်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားသူမည်သူမဆိုအားတားဆီးပိတ်ပင်မှုများသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုရှိသည့်အုပ်စုများကိုအသုံးမပြုဘဲကူညီမည့်အကြံပေးချက်များစာရင်းဖြစ်သည်။
သင်၎င်းကိုစဉ်းစားနေလျှင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုသဘောကျသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်အတူ - သင်စဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့စိတ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်သို့ drifts အကယ်. တစ်ဦးကိုမှန်ကန်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းကိုပြုလုပ်၏အောက်ဆုံးရ။ ငါသည်ဤလမျးခရီး၌ငါ၏စိတ်ဓါတ်များပြောင်းလဲပစ်ရန်ရုတ်တရက်လိုအပ်ကြောင်းကြောင်းရှိသမျှတို့ကိုငါဘယျလိုခံစားနေပါတယ်? တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုကဲ့ရဲ့ခဲ့သလား ငါ့ကိုငြင်းပယ်? ငါလျစ်လျူရှုခံစားရပါသလား? ငါအချို့အပျက်သဘော downer လမ်းအတွက်စဉ်းစားခဲ့သလား
သင့်စိတ်ထဲတွင်အတွေး၊ မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ပေါ်လာလျှင်၎င်းကိုမတိုက်ခိုက်ပါနှင့်၊ တိုက်ရိုက်မတိုက်ပါနှင့်၊ သင်မီးသာလောင်လိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, အခြားအရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကိုထားပါ။ သင်အကြိုက်ဆုံးရော့ခ်သီချင်းကိုသီဆိုပါ၊ အလုပ်ပြီးနောက်စီစဉ်ပါ၊ သင်ကျေးဇူးတင်ရမည့်အရာတစ်ခုစဉ်းစားပါ။
(Idol) ဒါဟာ Objectifying မရှိရင်အလှအပတွေရဲ့ရန်။
၁။ လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တွေ့လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်သည်။
၂) အခြားအချိန်တွေမှာ၊ သူမကိုရဲရဲရဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ထားလိမ့်မယ်။
၃။ အခြားအချိန်တွေမှာတော့ဒီမဲနှိုက်ခြင်းဟာကျွန်မအတွက်အရမ်းပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မပိုပြီးနက်ရှိုင်းတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတာကိုဘုရားသခင်သိပါတယ်။ ရေငတ်နိုင်တာကကျွန်မအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အလှတရားကိုဖြတ်သန်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါပဲ။
ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏အလှအပကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းမပြုတော့ဘဲကျွန်ုပ်သည်ရေငတ်ခြင်းအဆင့်ကိုအမျိုးသမီးများအတွက်မဟုတ်ဘဲရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုပါ။ ၎င်းမှာလှပမှုနှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောသခင်ဘုရား၏အသက်ရှင်ရန်ရေအတွက်ဖြစ်သည်။ အားလုံးမကြာခဏဒီကမ္ဘာ၏။
၁) ကျွန်ုပ်၏စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းဖြင့်လိုအပ်ချက်အချို့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးစားနေသည့်ပြင်ပမှဖြစ်စေ၊
[အခြားသူများအတွက်မူဥာဏ်ပညာပေးသမျှကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းစသည်တို့မှတစ်ဆင့်ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အခြားနည်းလမ်းများရှိနိုင်သည်။ ]
သင်သည်အရက်ကိုမသောက်တော့ပါကသင်သည်အရက်မသောက်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ဆေးဝါးသောက်ရန်လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ကိုမသုံးတော့ပါကသင်သည်လိင်စွဲလမ်းသူလည်းမဟုတ်ပါ။ “ တစ်ချိန်ကစွဲလမ်းသူတစ် ဦး သည်အမြဲတမ်းစွဲလမ်းသူ” ဟုပြောခြင်းသည်မှားသည်။ အမှန်မှာ၊ လူတစ် ဦး သည်နှစ် - x - ပမာဏအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းထားလျှင်ပင် - စွဲလမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် # #! + ပန်ကာကိုထိမှန်သည့်တစ်ရက်ပြန်လာရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
သင်သည်သင်၏စွဲမဖြစ်ကြရ, မသင့်စိတ်ကိုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်သလိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်။ သင်သည်သင်၏ပုံပြင်မဟုတ်ပေမယ့် it- ၏သကျသခေံနှင့်သင်မည်သို့ကြောင့်အနက်ကိုဘော်ပြဖို့ရှေးခယျြအားလုံးသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှအရှုံးပေးပြီးမင်းအားနည်းနေတယ်၊ ​​အားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုမယုံနဲ့! သင်သည်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရပြီး၊ သင့်ကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်ပြီးချစ်မြတ်နိုးသည်။ သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုအလွန်ကောင်းစေသည့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအပြစ်နှင့်အပြစ်တင်ခြင်းကိုမကိုင်တွယ်သင့်ပါ။
သင်ယုံကြည်သူဖြစ်စေမသည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ကယုံကြည်သူတစ် ဦး မဟုတ်လျှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံနေရပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ချစ်ပါ။
အရှက်ကွဲ Factor ဖြေရှင်းနိုင်။
ယခင်ကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအဆိပ်-အရှက်ကွဲခြင်းကိုမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့စွဲမောင်း, ငါတို့ Self-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတူ jacks ။
၁။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတရား ၀ င်မှု၊ ၀ ိညာဉ်ရေးအရအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အလွန်အကျွံကျင့် ၀ တ်ပြုမှု (နှစ် ဦး နှစ်ဖက်လုံးနှင့်ပြည်တွင်း၌) သည်ကျွန်ုပ်သည်လိုအပ်သောအရာများထက်နှစ်ပေါင်းများစွာအခက်အခဲများစွာကြုံခဲ့ရသည်။ - and-
၂။ ဂရေ့စ်၊ ကျွန်ုပ်နားလည်လာတာကခေါင်းကိုရှက်ခြင်း၊ နားလည်ရန် - ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအားလုံးသည်ယခုတွင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည် - အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်တို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် ((၂၅ နှစ်ကျော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနောက်၌ပင်) လက်တွေ့ကျကျပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်မအောင်မြင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာထနိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုန်ထူ။ ဆက်သွားနိုင်သည်။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားအချက်မဟုတ်တော့ဘူး။ သေချာတာပေါ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်တာဟာကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းပြီးကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားတာဟာကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကမကျော်လွှားနိုင်တဲ့အပြစ်ကဘုရားသခင်နဲ့ငါ့ကိုဝေးကွာသွားစေတယ်။ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုသို့ကျရောက်သွားလျှင်ပင်၊ ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကို iota တစ်ခုမှမထိခိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာခြင်းသို့မရောက်ပါ။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့လမ်းလျှောက်မှုကိုတိုင်းတာချင်တဲ့သူတချို့အတွက်ဒါကအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘယ်သူ့ကိုမှမကူညီဘူး။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်ကိုပြောနိုင်သည်။
stop ကိုယ်ပိုင်ဆေးပညာ, မျက်နှာ Reality ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်ပေါင်းပင်များသာဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည့်အမြစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ။ အမြစ်သို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းသောပြissuesနာများကိုသိရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်ပါကစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၊ အတိတ်ကနာကျင်မှုများ၊ စိတ်ထိခိုက်စရာအဖြစ်အပျက်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလရင်းမြစ်မိသားစုအတွင်းအပျက်သဘောဆောင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းသောဖြေရှင်းမှုယန္တရားများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ မှားယွင်းသောဖြေရှင်းနည်းများသည်မိမိကိုယ်ကိုသာဆေးကုသခြင်း (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏နာကျင်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးစောင်မပါဘဲဤအရာများကိုရင်ဆိုင်ရန်ကြောက်လန့်နေကြသည်။
ဤသည်လူကြီးများအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမှလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ဤမှားယွင်းသော-ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားများပစ်ပါကညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြစ်, အသက်ကိုရတတ်၏မသက်မသာနဲ့ပင်နာကျင်နေ့က-to-နေ့ကပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုလေ့ကျင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်အပြုအမူများကိုလုပ်ဆောင်ရန်သွေးဆောင်ခံရသည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပ၌ဖြစ်စေဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ထိုအတိုင်းအတာကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြissuesနာများနှင့်အတူထိုင်။ ၎င်းတို့ကို ဦး တည်။ (မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်၎င်း၊ မကောင်းသောသူနှင့်အရုပ်ဆိုးသည့်အရာများကိုခံစားခွင့်ပြုရန်) ကြိုးစား။ (သို့မဟုတ်) ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အခြားပိုမိုကျန်းမာသောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
အတော်များများကအစားအတိတ်၏အရာအဖြစ်ကြသောအခါနောက်ကွယ်မှ၏, သူတို့ရှေ့မှာကသူတို့စှဲထားကြ၏။ ကျနော်တို့ကယခင်စွဲအဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသို့မဟုတ်မရှိတော့အားလုံးမှာစွဲအဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါက Porn ဂယ်ရီ Wilson ကတစ်ခု option ကို, သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲငါဂျက် Trimpey (ဆင်ခြင်တုံတရား Recovery ကို) ၏, တဖန်အရက်မသောက်ရဘယ်တော့မှမရဖြစ်ပါတယ်။
ဤအရာသည်ဤအရာများကိုကျော်လွှားရန်၊ ရပ်တန့်ရန်နှင့်လုံးဝပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်ဟူသောရဲရင့်သောစိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ငါတို့နိုးထလာမယ်၊ ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်တော့မှထပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆေးဝါးကုသဖို့ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုဘူးဆိုတာသိတယ်။ ယင်းသည်လွတ်မြောက်စေပြီးအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်အတွေးမဟုတ်လော။
ချက်ချင်းပင်နောက်တဖန်မည်သည့်အခါမျှအသုံးမပြုတော့ဟုဆုံးဖြတ်သူများစွာရှိနေသော်လည်း၎င်းကိုသူတို့စွဲကိုင်ထားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းမှုများကိုရည်မှန်းချက်ကြီးစွာဖြင့်သာပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်မူးယစ်ဆေးဝါးကို ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ သို့မဟုတ်အနှစ် ၃၀ လုံးလုံးစွန့်လွှတ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အလေ့အထတွေကအရမ်းစွဲနေတယ်၊ ​​အာရုံကြောလမ်းကြောင်းက dopamine အလုအယက်ဆီကိုအမြစ်တွယ်နေတယ်၊ ​​ငါတို့ဟာကိုကင်းဆေးစွဲသူတွေနဲ့ပိုတူတယ်၊
ထို့ကြောင့်လက်တွေ့ကျသောပန်းတိုင်များထားပါ။ ငါအဆင့်၌သတ္တုတွင်းကိုပြု၏။ ကျွန်ုပ်တွင်ယေဘူယျရည်မှန်းချက် ၁၂၀ ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုရက်ပေါင်း ၄၀ ရည်မှန်းချက် ၂၀ ထက်ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သော (နှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်သော) ကိုက်များတွင်ချိုးဖျက်လိုက်သည်။ သင်တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်တစ်ရက်ပင်ပန်းတိုင်တစ်ခုအနေဖြင့်ရှိလျှင်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှ သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအတန်ငယ်တည်ဆောက်ပြီးသောအခါသင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ချော်ခြင်း၊ ချိခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သက်ရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်သည်။
1) Slip- သငျသညျကိုသာသက်ရောက်တဲ့မမျှော်လင့်ဘဲသွေးဆောင်မှု, ဒါပေမယ့်သင်ချက်ချင်းသင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုပြန်လည်နှင့်ပေါ်သွားပါ။ သုံးစွဲဖို့တစ်ဦးသွေးဆောင်မှုရှိခဲ့သော်လည်းအဘယ်သူမျှမပြိုလဲ, ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းပေါ်မှာအချို့သောသရုပ်ဆောင်ရှိခဲ့ပေမယ့်သင်ချက်ချင်းရပ်တန့်နှင့်သင့်ဣန္ဒြေလာတယ်။
2) Lapse- သွေးဆောင်မှုအောက်မှာတစ်ဦးကဆြုံးရှိ၏။ သင်တို့မူကားမကြာမီဖွင့်ပြန်ရတယ်, နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူပြန်လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ သင်အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူဖို့လိုအပ်သောအရာကိုသင်ယူခြင်း, ထိုအရပ်မှကြွ။
3) Relapse - လဲကျသွားပြီး၊ ထပ်ခါထပ်ခါလဲကျ၊ ယခင်ချုံးကိုပတ်ပတ်လည်စွဲလမ်းခဲ့ပြီးရလဒ်အဖြစ်ပြန်လည်ချုံးတွေ့ရှိရသည်။ အစောပိုင်းကအတွက်စေ့စပ်စွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ထပ်ရှိပါတယ်။
အရေးကြီးတယ်။ စလစ်သို့မဟုတ်ချုံးကိုတုံ့ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း၊ ၎င်းသည်သင်ခန်းစာရရှိခြင်းလော၊
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမြင်ကွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ငြင်းဆန်။ ထပ်မံကြိုးစားရန်မဟုတ်ပါကအပြီးသတ်ရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိချေ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အစီအစဉ်ရှိခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့တစ်စုံတစ်ယောက်က reboot ကောင်တာကို reset လုပ်တာကဘာကြောင့်လဲ။
အသုံးမပြုရန်နေ့စဉ်စိတ်အားထက်သန်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်။ ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောဘဝ၏အနာဂတ်အတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဟန့်အတားများမရှိဘဲနေရန်စီစဉ်ထားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူများကိုအန avoid တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းအစားကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြားပန်းတိုင်များဖြစ်စေအာရုံစူးစိုက်ခြင်းထက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝရည်မှန်းချက်များကိုအာရုံစိုက်သည်။
အပြုအမူနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိတယ်၊ ငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြတဲ့အခါငါတို့ချစ်ခင်ရသူရဲ့မျက်နှာမှာနာကျင်မှုနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေကိုသတိရနေတယ်။ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုရန်သွေးဆောင်ခံရသည့်အခါအခြားသူများ၊ အထူးသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းကိုသတိရသင့်သည်။
ဒါကိုတစ် ဦး တည်းလုပ်လို့ရလား ကျွန်မရဲ့ရုန်းကန်မှုအများစုဟာအထီးကျန်ဆန်နေခဲ့ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်မယုံတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဤနေရာတွင် NoFap Reddit (သို့) Reboot Nation ကဲ့သို့အထောက်အကူပြုကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပုံရသည်။ သို့သော်ဤသည်သေချာပေါက်တာဝန်ခံမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အားပေးကူညီဖို့ဒီမှာရှိနေတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားတာဝန်ခံကိုင်? ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်ပြန်လည် reboot လုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခြားသူရဲ့ rebooting ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြင်ပစိတ်ကူးအတွက်မဟုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရောက်နေရင်တော့အခြားလူတစ်ယောက်ကမင်းရဲ့ရုန်းကန်နေရတာတွေကိုနားလည်ဖို့အရမ်းကိုအားရှိလာတယ်။ အမှန်တကယ်စာနာမှုရှိရန် (စာနာရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ) သင့်အားစစ်ကြောစီရင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲသင့်ကိုသနားကြင်နာတတ်သောအဖော်၊ အစ်ကိုများလိုအပ်သည်။
ဤသည်အထက်ပါအခြားအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် 'အန္တရာယ်များ' ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူမှတ်နိုင်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အနီရောင်ခရိုင်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်းယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောအန္တရာယ်မဟုတ်ပါ ငါကတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်သွေးဆောင်မှုမခံတော့သကဲ့သို့ သို့သော်ယခုအန risk တရာယ်မြင့်မားသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော 'what-if' အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ခင်ပွန်းသည်ကမြို့အပြင်ကိုထွက်သွားလျှင်သင့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်တစ်ယောက်တည်းနေရသလား။ ဒါမှမဟုတ်၊ ကွန်ပျူတာကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာအသုံးပြုခွင့်ရှိပါသလား။ အချို့သောသူများအတွက်ရေချိုးခန်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော်လည်းသင်သဘောပေါက်သည်။
၁။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ပါ -“ ငါဒီအခြေအနေမျိုးရောက်နေရင်ငါလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဝေးအပြုအမူမှသင်၏အချိန်နှင့်စွမ်းအင် (နှင့်အကျိုးစီးပွား) ကိုတက်ယူလိမ့်မည်ဟုအခြားလှုပ်ရှားမှုများရှိခြင်းကြောင့် 2) အစီအစဉ်။
၃) အန္တရာယ်များသည့်အခြေအနေကိုမတူညီသောနေရာတွင်အစားထိုးပါ။ ဥပမာ - ရေချိုးခန်း၌ (ဥပမာ) သင် pmo အစားသင့်ဘ ၀ တွင်သင်ကျေးဇူးတင်နေသည့်အရာကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ယူနိုင်သည်။ သင်၏ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်အသံကိုလည်းထိုတွင်လည်းလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ သင်အိမ်မှထွက်ခွာနိုင်သည်၊ အခြားလမ်းကြောင်းတစ်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ စသည်တို့သည်ဤအခြေအနေများသည်အလွန်အမင်းအန္တရာယ်မများသည့်တိုင်အောင်အစပိုင်းတွင် 'လေ့ကျင့်ရေးဘီး' များကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။
သေချာသည်မှာရှောင်ရှားသင့်သည့်သတိထားရမည့်အန္တရာယ်များသောအခြေအနေများအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ မမျှော်လင့်သောဗလာထွက်ပေါ်လာသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုသည်ရုပ်ရှင်တစ်ခုတွင်ပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့သည် '၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်နိုင်သည်' ကိုမဆုံးဖြတ်ဘဲစောင့်ကြည့်နေမည်မဟုတ်ပါ။
ဒီအချက်တွေကဒီမှာလာပြီးအကူအညီတောင်းခံလာကြတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ တွင်အသုံးပြုနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤမဆုတ်မနစ်နှင့်စွဲလမ်းမှုအပြုအမူများနှင့်အတူအနှစ် ၂၀ ကျော်လုံးလုံးရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ခံစားရသည်၊
ပို့ရန် LINK - တစ်အောင်မြင်သော Reboot သို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက် 10 သိကောင်းစရာများ!